Indlela yokufumana abalandeli abaninzi kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Unabalandeli abaninzi kwi-twitter?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 234
Ngaba i-twitter yeyona ntanethi ibalulekileyo kwezentlalo namhlanje? Ngokunokwenzeka ayisiyiyo, kodwa ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zikhethekileyo kwaye zisetyenziswa ngabasebenzisi benethiwekhi.
I-Twitter ibonelela ngenani elikhulu leempapasho ngokwahluka kakhulu kolwazi. Ukuzibeka ngokwakho kwi-twitter ngokusebenzisa iakhawunti kunye nenani elikhulu labalandeli kunokuba ngumsebenzi wokunyuka, kodwa kungenzeki, ngakumbi kwihlabathi langoku elikhuphisanayo.
Ukunyusa inani labantu abalandela iprofayile yakho ayisiyonto ilula, ngakumbi xa uthumela ii-tweets ezitsala umdla ngumsebenzi onzima. Ayifani into yokuba ngumntu oqhelekileyo kunomntu odumileyo okanye umntu esidlangalaleni, onokuba nexesha elilula lokufumana uxabiso "olulandelayo"
Ke, ukuze uqokelele abalandeli abaninzi yonke imihla, kuya kufuneka ufunde amaqhinga okukufeza. Kukho iingcebiso ekufuneka uzilandele Zizo zilandelayo:
Iingcebiso zokwandisa abalandeli
Into ephambili ekufuneka uyenzile kukumisela ngokufanelekileyo iprofayile yakho. Nje ukuba udibane, bhala i-bio yakho kwaye ukhethe iifoto kunye neefoto eziphezulu.
Beka indawo okuyo kunye nentloko ye-tweet emele iprofayile yakho.
Isicwangciso-qhinga kufuneka sijolise ekwandiseni ukubonakala kweprofayili, ukupapasha ii-tweets ezinomdla ezitsala umdla kunye nokuphucula ukusebenzisana. Kwelinye icala, kuya kufuneka wandise ukufikelela kwakho kwaye uthathe ithuba lokuhlalutya.
Isiseko sephrofayili yakho kufuneka sibe zii-tweets.
Ukufumana iifayile zokubamba ingqalelo yabasebenzisi kufuneka zijolise kwinjongo yeprofayile yakho njengenethiwekhi yoluntu. Abasebenzisi abaninzi be-twitter basebenzisa iprofayili yabo ukuthetha ngesihloko esithile. Kwiinethiwekhi uza kufumana zonke iintlobo zemizekelo. Ukusuka kwabo bapapasha izihloko ezinxulumene nesisu sokutya ezinje ngeendlela zokupheka zazo zonke iintlobo, ukuya kwiividiyo zobomi babo bemihla ngemihla.
Ke ngoko, ukufumana umxholo weprofayile yakho kuya kuba yeyona nto ibaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukuhamba rhoqo nokungalawuleki kwabalandeli. Abasebenzisi benethiwekhi ziingcali ekusetyenzisweni komxholo, ke kuya kufuneka ucinge ngononophelo, olusisitayile esiya kukuthanda.
Ukumema umntu ukuba akulandele kulula njengokumkhuthaza ukuba enze njalo. Abasebenzisi abaqhelekileyo benethiwekhi bafuna ukufunda, ukunxibelelana kunye nokonwaba nabantu abathanda izinto ezifanayo nezabo.
Kubaluleke kakhulu ukuba ii-tweets zakho zeprofayili rhoqo, kuba uphawu lothungelwano lutshintsho lwabo olunamandla nolusisigxina. Oku kuya kunceda abalandeli bakho ukuba bahlale behlaziywa kunye neempapasho zakho. Oku kunokuvakala kulula, kodwa kuya kubandakanya umzamo wokuyila rhoqo.
Yandisa ukufikelela kwakho
Ukunyusa ukufikelela kwakho ungazenza izinto ezithile. Nxibelelana nabalandeli bakho, ukuze bazive bechongwe ngqalelo yakho.
Yenza iakhawunti yakho ihambise imicimbi ngexesha lokwenyani. Ngokusebenzisa i-hashtag esemthethweni yomsitho, uya kuba nakho ukunxibelelana nabazimase umsitho kwaye kunokwenzeka ukuba uphucule ukubonakala kweprofayile yakho kubaphulaphuli ngaphandle kwabo uqheleyo.
Kukwacetyiswa ukuba uwele iiakhawunti zakho zemidiya yoluntu. Kufanelekile ukuba upapasho lwakho lwe-twitter lukwabonakaliswe kwi-Facebook okanye kwi-Instagram, ukuze uzazise kwabanye abasebenzisi.
1 Iingcebiso zokwandisa abalandeli
2 Isiseko sephrofayili yakho kufuneka sibe zii-tweets.
3 Yandisa ukufikelela kwakho
Ndenza njani imali ngeakhawunti yam ye-Instagram?
Ungayisebenzisa njani i-twitter?